Dhirbaaxo weyn oo ku dhacday Cali Galaydh iyo xulafadiisii Somaliland necbayd, Mooshinkii uu soo dhigay ee heshiiskii Somaliland iyo Somalia oo la diiday in laga doodo | Somaliland Hargeisa City
Dhirbaaxo weyn oo ku dhacday Cali Galaydh iyo xulafadiisii Somaliland necbayd, Mooshinkii uu soo dhigay ee heshiiskii Somaliland iyo Somalia oo la diiday in laga doodo
shir maanta ka dhacay baarlamanka dawladda Federaalka Somalia oo la doonayey in laga doodo mooshin uu soo mid kamida cadawyga Somaliland
Cali Khaliif Galaydh iyo dhawr uu soo xulafaystay ayaa maalintii uu heshiisku ka dhacay, caasimadda Turkiga ee Ankara, 13 April. Heshiiskaa oo uu Cali Galaydh ku tilmaamay mid dawladda federaalki aqoonsatay Somaliland. Waxaanu ku doodayey in arritnaasi tahay mid khaldan, mooshin uu keeni doono baarlamanka. Haddaba shir-guddoonka baarlamanka Federaalka Somalia ayaa ku gacan-saydhay mooshinkaa uu watay Cali Galaydh.
Dawladda Federaalka somalia, waa in ay talaabbo adag ka qaado dhinaceeda qofka carqaladayna heshiiskii ay wada galeen labada dal ee Somaliland iyo Somalia.
war amuurtaas ku saabsan halkan hoose ka akhriso anagoo (Somaliland1991) ka soo xiganay Hiiraan Online.com
Kulan uu maanta yeeshay baarlamaanka Soomaaliya ayaa waxaa hadalka ka sheegay guddoomiye ku xigeenka labaad ee baarlamaanka Soomaaliya, Mahad Cabdalla Cawad, isagoo xusay in xildhibaannadu ay dalban karaan in dadkii ka qaybgalay ay horyimaadaan baarlamaanka, balse aan heshiiskaas laga hadli karin.
“Barnaamijka xukuumadda ee la meel-mariyay 13-kii Novmber 2012, wuxuu xukuumadda siinayaa awood ay ku qabsato howlaha siyaasadda dalka, sidaa daraadeed golaha baarlamaanku ma faragelin karo howlaha xukuumadda ee dhinaca siyaasadda,” ayuu yiri Cawad.
Sidoo kale, guddoomiye ku xigeenka ayaa sheegay inaysan ka doodi karin war-murtiyeedkii ama heshiiskiii kasoo baxay shirkii Somalia iyo Somaliland wuxuuna xusay in xukuumadu ay xor u tahay inay ku matasho Soomaaliya arrimaha siyaasadda.
“Xildhibaannadii mooshinka soo gudbiyay waxaan ku leeyahay mooshinkan ma ahan mid sharciga waafaqsan sidaa daraadeed loogama hadlayo shirka baarlamaanka arrintaas, balse waxaad xaq u leedihiin inaad u yeertaan qaar ka mid ah xubnihii ka qaybgalay si aad su’aalo u weydiisaan,” ayuu ku daray hadalkiisa.
Hadalkan ayaa wuxuu imaanayaa kaddib markii xildhibaanno baarlamaanka ka tirsan ay dhawaan u gudbiyeen baarlamaanka ka hadalka heshiiskii dalka Turkiga ku dhexmaray dowladda Soomaaliya iyo maamulka Somailand, kaas oo ahaa mid iskaashi oo ay qodobbadiisa ka mid ahaayeen in la wadaago deeqaha dibadda laga helo iyo ka shaqeynta ammaanka.
Waa markii ugu horreysay oo guddoonka baarlamaanka Soomaaliya ay si toos ah u diidaan mooshin ay soo gudbiyeen xildhibaano ka tirsan golaha shacabka, waxaase jirta in dhawaan uu guddoomiyaha baarlamaanka ku wargeliyay xildhibaannada in dib loogu soo laabto ka hadalka qodobkaas.
« Madaxweynha Somaliland iyo weftigii u hogaaminayey oo la kulmaya wasiir ku xigeenka arrimaha Dibeda ee USA (Maraykanka)
Halkan ka akhriso qado sharaftii loo sameeyey Madaxweynaha Somaliland iyo weftigiisa Dinner Discussion with His Excellency Ahmed Mahamoud Silanyo, President of Somaliland »